जनकपुरमा एमाले नेता चढेको गाडी दुर्घटनाः दुई जनाको मृत्यु, ४ जना गम्भीर : पुरा जानकारी सहित !! – Complete Nepali News Portal
जनकपुरमा एमाले नेता चढेको गाडी दुर्घटनाः दुई जनाको मृत्यु, ४ जना गम्भीर : पुरा जानकारी सहित !!
July 14, 2017	1,039 Views
काठमाडौं, २९ असार । धनुषाको जनकपुरमा नेकपा एमालेका नेता चढेको गाडी दुर्घटना हुँदा दुई जना मृत्यु भएको छ । चार जनाको अवस्था गम्भीर छ ।
जनकपुरवासी युवा संघका नेता सञ्जीव झाका अनुसार दुर्घटनामा सिरहाको लहान नगरपालिका १२ बस्ने ४० वर्षीय एमाले कार्यकर्ता ललिता चौधरी र ३० वर्षीया सरिता देवी चौधरी रहेका छन् । घाइते पूर्व सांसद रामरति राम, केन्द्रीय बिभागका सदस्य मागेद कामत, जिल्ला कमिटी सदस्य सिरहा सागर देबी चौधरी र दिलिप चौधरीको अवस्था गम्भीर छ ।
उनीहरुलाई थप उपचारका लागि बिराटनगर न्युरो अस्पताल पठाइएको नेता झाले जनकपुरबाट दैनिक नेपाललाई बताए । जनकपुरमा दुर्घटना भएको गाडीमा सिरहाका एमाले नेता कार्यकर्ता सवार थिए ।
युवा संघका सचिवालय सदस्य सञ्जीव झाका अनुसार विहीबार जनकपुरमा पर्यटनसम्बन्धी एउटा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । पर्यटन संस्थामा आवद्ध एमाले नेता कार्यकर्ता उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन सिरहाबाट जनकपुर आइरहेका थिए । करिब साढे ३ बजेको समय थियो जनकपुरको मुजेलिया चोक एमाले नेता कार्यकर्ता सवार जीप एउटा स्कुल बसमा ठोक्कियो । र, दुई कार्यकर्ताको घटनास्थलमै मृत्यु भयो । ‘यताबाट स्कुल बस गइरहेको थियो । उताबाट हाम्रा साथीहरु चढेको जीप आइरहेको थियो,’ झाले फोनमा भने– ‘चोक थियो, बीचमा एक्कासी अर्काेतिरबाट ट्रक आइदियो । तिव्र गतिमा रहेको जीपका चालकले सन्तुलन गुमाए । र, जीप स्कुल बसमा ठोक्किन पुग्यो ।’ – दैनिक नेपाल